Musharaxiinta Golaha Wakiilada iyo Deegaanka Gabiley Eng. Cabdikariin iyo Axmed Wali oo Deegaanada Gabiley, Geed-baladh, Alaybaday Ugu Awood Sheegtay Dhigooda, kuna soo Maray Kormeer Xog-ogaal Noqosho ah...
Saturday February 06, 2021 - 01:50:40 in Wararka by Super Admin
Gabiley(Xogreebnews)- Musharax Xildhibaan Baarlamaan Eng. Cabdikariin Maxamed Muxumed iyo Wafti Balaadhan oo u hoggaaminayo, ayaa Kormeer dhoola-tus ah, iyo u Xog-ogaal noqosho ah kusoo maray Deegaano hoos-yimada Gobolka Gabiley.
Sidoo kale Musharax Xildhibaan Baarlamaan Eng. Cabdikariin Maxamed Muxumed, waxa ku wehelinayey safarka Musharax Xildhibaan gole-deegaan Axmed Wali Cabdilahi Khaliif, oo u sharaxan golaha Deegaanka degmada Gabiley. Sidoo kale weliba haldoor kaloo saamayn ku leh deegaanada koon-furta Gobolka Gabiley iyo Xildhibaan Cabdilahi Blacki oo kamid ah mudanayaasha golaha Wakiillada Somaliland.
Waftiga ayaa si weyn loogu soo Dhoweyey deegaanada Gabiley, iyo Allaybaday iyo weliba Tuulooyin kale oo Hoosyimada Gobolka Gabiley, oo ay kamid yihiin Boqor, Boodhley, Magaalo Xayd, Gashaamo,. Geed-balaadh,. Jiingada, M Farxaan,. Ijaara iyo Degaano kale oo faro badan.
Safarka labada Musharax ayaa ah Xog-ogaal u noqosho iyo dhoolatus ay ku muujinaya cududooda Taageero, waxana deegaanadaasi hal-daba la' ugu muujiyeen Taageero aan kala hadh lahayn, waxanay deegaanaas ugu awood Sheegteen mushariinta kale ee deegaanadas kasoo jeeda.